Yintoni elawula ukutya kwethu ukutya? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Siqhele ukuthi "ndonelisekile", kodwa ngaba ukhona umntu owaziyo ukuba kuthetha ntoni oko? Isifundo esitsha sifumanise ukuba yintoni ebonisa ukuba unomdla kwaye uxelela umzimba wethu ukuba uyeke ukutya wahlukile kunangaphambili.
Ngokwabaphandi beYunivesithi yaseCalifornia eSan Francisco eMelika, ukwandiswa kwamathumbu kudlala indima ebalulekileyo ekubonakaliseni ukuba "sihluthi."
1 Ukufunda ukutya
2 Kutheni kubalulekile?
3 Amanyathelo alandelayo okwazi ukuba ngubani olawula ukutya kwethu
Iimithambo zemithambo-luvo yamathumbu yayisele ihlelwe yaziindidi ezintathu: iziphelo ze-mucosal, i-intraganglionic laminar arrays (IGLEs), kunye ne-intramuscular arrays. Nangona kunjalo, kuncinci okwaziwayo malunga noyilo kunye nomsebenzi wohlobo ngalunye.
Ngokutsho kohlalutyo, i-vagus nerve yeyona ndlela iphambili ehambisa ulwazi ukusuka emathunjini ukuya kwingqondo, kodwa ubunikazi kunye nemisebenzi yee-neurons ezithile ezithumela le miqondiso azikaqondwa kakuhle.
Abaphandi bavuselele ezi luvo luhlukeneyo kwiigundane njengoko besitya, kuvavanywa ukubona ukuba yeyiphi into enokubayeka. Uvavanyo lokuqala lwenziwa kwiziphelo ze-mucosa, ezilawula ukutya kunye nokubona iihormoni ezinxulumene nendlala.
Abaphandi bamangaliswa kukubona ukuba ukukhuthazwa kwezi neurons azichaphazele ukondliwa kweempuku. Nangona kunjalo, xa ii-IGLEs, ezinoxanduva lokufumanisa ukolula emathunjini, zavuselelwa, iigundane zayeka ukutya kwaphela.
Ukutya kunye nendlala yiyo esikhokelela ekubeni sitye. Njengabantu abaninzi abafuna iindlela zokulawula iimvakalelo zabo kwaye bayeke iminqweno yabo, kubalulekile ukuba ufumane ukuba yintoni echaphazela umnqweno wethu wokutya.
Izifundo ezinje zinokubonelela ngemikhondo emitsha kunyango lokutyeba kakhulu. Iziphumo zophando zikwabonisa ukuba kutheni utyando lwe-bariatric lusebenza kangaka- kutheni amathumbu amancinci ekhokelela ekunwebeni ngokukhawuleza komzimba.
Amanyathelo alandelayo okwazi ukuba ngubani olawula ukutya kwethu
Iziphumo zolu phononongo zivumele abaphandi ukuba benze imephu esexesheni yokuba amathumbu asebenza njani, echaza ukuba iintlobo zeeseli zangasese ziyiphembelela njani indlela yamathumbu, ezichaphazela zombini ukutya kunye nendlala. Ngoku siyazi ukuba ukwenza ukuba ii-vagal elongation sensors ziyindlela enamandla yokuthintela ukondla.
Nangona kunjalo, uphando oluthe kratya luyafuneka ukufumanisa ukuba zeziphi ezizezona zivuselelayo xa sisitya.
Igwele lesondlo, yintoni kwaye ziziphi izibonelelo?
I-Polynomial factorization: iintlobo, imizekelo kunye nokuzilolonga.